Nambara ny fenitra vaovao momba ny Audio Type-C USB | Vaovao momba ny gadget
Nambara ny fenitra vaovao momba ny Audio Type-C USB
Betsaka ireo izay nitaraina tany an-danitra tamin'ny vaovao fa hanala ny audio jack amin'ny finday avo lenta farany i Apple mba hamelezana ny tsena. Taorian'ity hetsika ity sy ny tsikera voaray dia maro ireo orinasa nanaraka ity làlana ity, eny fa na ireo fikambanana toa ny USB-IF, miandraikitra ny famolavolana endrika ho avy sy ny fenitra mety hitranga miaraka amin'ireo mpanamboatra fitaovana elektronika lehibe, dia nanambara izay nantsoin'izy ireo hoe USB Audio Device Class 3.0 na inona no mitovy, ny fenitra ho an'ny audio USB Type C.
Amin'izany fomba izany dia toa ny farany ireo mpamorona sy mpamolavola ireo haitao vaovao izay hahatratra ny tsena dia miara-mivory ka, farafaharatsiny, mandritra ny fotoana fohy, ireo telefaona avo lenta farany manafoana ilay jack audio. Raha izaho manokana dia miaiky aho fa miatrika fivoarana izay tsy lojika fotsiny isika, ary raha ny fahitako azy dia ilaina izany. Tokony hojerentsika fa ny jack audio 3,5 mm dia ny tena izy fampahatsiahivana analogie farany ao anatin'ny fitaovana izay niomerika tanteraka ankehitriny.
USB-IF dia manambara ny famoahana fenitra vaovao ho an'ny audio USB Type-C.
Araka ny nambaran'i Apple tamin'izany fotoana izany dia tsy ny habaka anatiny ilaina hatrany no voatahiry, fa ankehitriny ny mpanamboatra dia afaka manatsotra be ny famolavolana anatiny ny terminal-dry zareo rehetra, manatsara ny habaka misy amin'ny fomba mahomby kokoa. Tsy isalasalana fa ny fandefasana ity fenitra vaovao ity ho an'ny audio USB Type-C dia dingana iray tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny andiana terminal izay ho hitantsika eny an-tsena ao anatin'ny fotoana fohy, na dia tsy eo noho eo aza.
Ankehitriny, tsy midika izany fa ho lasa radika toa an'i Apple ny mpanamboatra, na dia misy fividianana ny iPhone farany misy azy aza dia misy adaptatera hanohizana ny fampiasana aroloha amin'ny androm-piainany iray manontolo. Amin'ny fenitra vaovao ho an'ny audio USB Type-C manohana ny fifandraisana analog sy digital izay midika fa, amin'ny alàlan'ny adapter, afaka manohy mampiasa ny headphone na ny mpandahateny isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » solosaina » Hardware » Nambara ny fenitra vaovao momba ny Audio Type-C USB
Ny Intel Core i7-7700k dia mampiseho amintsika ny zavatra azony atao
Solony 7 amin'ny WhatsApp no ​​tsara na tsara kokoa aza